Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: November 2010
အဆိုပါ ချုံခိုတိုက်ပွဲတွင် ကရင်တပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှု အနည်းငယ် ရှိခဲ့ပြီး နအဖနှင့် BGF တို့ထံမှ 81၊ 82၊ RPG၊ M1၊ M2 စသည့်လက်နက်များ အပါအ၀င် ကျည်ဆံတချို့ကိုလည်း သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်ဟု ဗိုလ်မှူးစောဆန်းအောင် က ပြောသည်။
ထို့အပြင် မြ၀တီခရိုင် ဝေါ်လေဒေသ၊ ဖလူးကျေးရွာတွင် ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၆ရက်နေ့ည (သောကြာနေ့)မှစ၍ ယနေ့အ ချိန်ထိ နအဖ စစ်တပ်နှင့် ကရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြား အပြန်အလှန် ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ နအဖဘက်က ၁ဦး သေဆုံးကာ ၂၅ဦးထိခိုက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး ကရင်တပ်ဖွဲ့မှ ၁ဦး အနည်းငယ် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထိုပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဖလူးကြီး၊ ဖလူးငယ်၊ ကျောက်ခက်စသည့်ကျေးရွာမှ ဒေသခံ ကရင်ပြည်သူ ၁,၀၀၀ကျော် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖို့ဖရမြို့နယ်အတွင်းရှိ နယ်စပ်နေရာများသို့ ထွက်ပြေးခိုလှုံခဲ့ရသည်။
အလားတူ ဘုရားသုံးဆူမြို့နယ်ခွဲရှိ တဲသုံးလုံးနှင့် ဇီးပင်ကျေးရွာကြားတွင် နအဖ ခမရ(၄၀၆)နှင့် ဒီကေဘီအေ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး စောအေ၀မ်းတပ်ဖွဲ့တို့ ပြောက်ကျားတိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ နအဖဘက်မှ ၂ဦး ပွဲချင်းပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ဝင်ဘာလ(၁၇)ရက်နေ.တုန်းကစီးတီးစတားဟိုတယ်အောက်ရှိအင်တာနက်ဆိုင်မှာတွေ.ရှိသည့်အချိန်ကိုက်ဗုံးလေလုံးသယ်ဆောင်သူကိုဖမ်းမိရင် ဆုငွေဒေါ်လာ(၁၀)သိန်းပေးမည်ဟုဗမာစစ်အစိုးရကြေညာနေသည်၊မသင်္ကာသူလူနှစ်ယောက်ကို CCTV Camara မှာတွေ.တယ်လို.လဲပြောတယ်၊မြို. လယ်မှာဗုံပေါက်ကွဲမှာကိုဗမာစစ်အစိုးရကတော်တော်ကိုစိုးရိမ်းပုံရတယ်၊သူတို.ဘာသာဖန်းတီးလုပ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ငွေ(၁၀)သိန်းရချင်သူများ သည်မောင်သန်းရွှေကိုသွားဖမ်းတော့၊မောင်းသန်းရွှေကိုဖမ်းမမိရင်ပြည်သူတွေကိုမစုံစမ်းနဲ.တော့၊စစ်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကပြည်သူတွေကိုအချိန်ကိုက်ဗုံး များထောင်ပြီးသတ်အုံးမှာလား၊
ခိုနူမ်းထုန်သတင်း၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် အမှတ် ၂ အိန္ဒိယ မြန်မာ
ကုန်သွယ်ရေးလမ်း ကြောင်းနှင့်နယ်စပ်ဒေသများတွင် နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့မှစ၍ စစ်တပ်အင်အားများ တိုးချဲ့ လာကြောင်း မျက်မြင်တဦး ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
” တခြားနယ်စပ်တွေမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီ၊ အနောက်ဖက်မှာလည်း လက်နက်ကိုင်တွေ မ၀င်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလို့ စစ်သားတွေက ပြောကြတယ်” ဟု စစ်သားနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
၄င်းသတင်းကြောင့် ချင်းပြည်နယ်ရှိ ခလရ ၂၆၆၊ ၂၆၈၊၂၆၉ နှင့် ကလေးမြို့အခြေစိုက် ခလရ ၈၉ တို့ကို နယ်စပ် ဒေသ များသို့ အင်အားဖြည့်
၄င်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ” Darkhai နှင့် Bukphir ကျေးရွာတွေမှာ အချို့က စခန်းချတယ်၊ စခန်းတခုမှာ စစ်သား ၃၀ ခန့်ရှိ တယ်၊ ယခင်ကတော့ ၁၀ ဦးကျော်ကျော်ပဲ ရှိတယ်၊ စစ်သားတွေ နယ်စပ်ဒေသများတွင် နေရာတကာ တွေ့နေရတယ်” ဟု နယ်စပ်၌ နေထိုင်သူ U TK Chhuma က ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကျေးရွာတိုင်းတွင် စစ်သားတွေ လှုပ်ရှားနေရသောကြောင့် ပြည်သူတွေ သွားလာရေး ကျဉ်းကျပ်နေရ သော် လည်း စစ်တပ်မှ တစုံတရာ နှောင့်ယှက်တာမျိုးမရှိကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောကြသည်။
” အမှတ် (၂) နယ်စပ်လမ်းပေါ်ရှိ အိန္ဒိယနယ်စပ် Tiau ကျေးရွာမှာတော့ အနားတ၀ုိုက်မှာတော့ စစ်သားတွေ အချိန်ပြည့် ကင်းလှဲ့နေကြတယ် ” ဟု Tiau ဒေသခံတဦးဖြစ်သူ U Sungvum က ပြောပြသည်။
အနောက်ဖက်ဒေသခတွင် လှုပ်ရှားနေသော ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး အပါအ၀င် တခြား တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များသည် ယခုနှစ်အတွင်း စစ်ရေး နိုင်ငံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြ သည်။ – Khonumthung News.
Junta increases forces in border areas
20 November 2010: The Burmese military junta has reinforced the armed forces on the Indo-Myanmar border area trade no.2from 12 November following the alliance by ethnic armed group’s to take on the Burmese Army if it launches offensives against rebels.
The Chin National Front in western Burma is part of the alliance with other ethnic armed groups. – Khonumthung News.
A Place to Call Home (A Song for Shan People and Shanland)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်မြောက်လာပါပြီ၊သို.သော်၊ကျနော်တို.ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ၊လူ.အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်တွေထောင်ထဲမှာကျန်ရှိဆဲ၊စိတ်မွန်းကြပ်နေဆဲ၊တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပါ၊မင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီး၊မင်းဇေယျာ၊စသည့်ကျောင်း သားခေါင်းဆောင်များနှင့်ဦးခွန်ထွန်းဦးစသည့်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊မစုစုနွယ်စသည့်လူ.အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊အရှင်ဂမ္ဘီ ရစသည့်ရဟန်းပျိုခေါင်းဆောင်တွေဟာထောင်ထဲမှာတိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပါ၊သူတို.ကိုစစ်အစိုးရကဘယ်တော့လွှတ်ပေးမလဲ၊ဘာကြောင့်ဖမ်းဆီး ထားသလဲဆိုတာကိုအန်အေလ်ဒီပါတီ၏ရှေ.နေအဖွဲ.ကအားရပါးရလုပ်ဆောင်ပေးမည့်ပုံနည်းပါးနေတယ်လို.ခံစားမိတယ်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်လွတ်မြောက်လာတာဟာလူတိုင်ကပျော်ရွှင်နေကြပေမဲ့ထောင်ထဲမှာကျန်းရှိနေသည့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၂၂၀၀ကျော်မလွတ်မြောက်လာသေးတာကြောင့်မျိုးဆက်သစ်များအတွက်စိတ်မပျော်ရွှင်နိုင်ပါ၊
ကရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရတပ် တိုက်ပွဲ ဆက်ဖြစ်
နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရတပ်များနှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များ တိုက်ပွဲဆက် တိုက်ဖြစ်ပွား လျှက်ရှိသည်။
ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်မှ တပ်အင်အားများ ထပ်မံတိုးချဲ့ကာ ထိုးစစ်ဆင်လျှက် ရှိကြောင်း တိုးတက်သောကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတပ်မတော် (ဒီကေဘီအေ) ဗိုလ်မှူး အေဝမ်းက ယခုလို ပြောသည်။
“လောလောဆယ် အခြေအနေက သူတို့ ဗျူဟာတွေတက်လာတယ်။ သူတို့ တပ်ရင်း သုံး လေး ရင်း လောက်ပါလာတယ်။ ကျနော်တို့ကို စစ်ဆင်ရေးထိုးဖို့ပေါ့။ အဲဒါတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက် အင်အားနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့တပ်ရင်း တစ်ရင်းမှာ တပ်အင်အား ၁၀၀ နဲ့ ၁၂၀ လောက်ပဲလေ အဲ့လောက်ပဲပါတယ်လေ။”
ယမန်နေ့ညက တိုက်ပွဲများ ထပ်မံဖြစ်ပွားနေသည်ဟု ဗိုလ်မှူးအေဝမ်းက ယခုလို ဆက်ပြောသည်။
“ သူတို့စစ်ဆင်ရေးထိုးလာတယ်။ အဲ့ဒါ ဗျူဟာ တစ် ဗျူဟာတက်လာတယ်။ သူတို့ အဲ့ဒါ တိုက်ပွဲလည်း တစ်လမ်းလုံးဖြစ်လာတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ အခု တစ်နေရာ ရွှေ့လိုက်တယ်လေ။ မွန်နယ်ဖက် အ ခြမ်း နယ်စပ်အနီးပေါ့ ကျနော်တို့ လောလောဆယ်ဆယ်တော့ အဲ့လိုပဲ နေရာရွှေ့ထားတယ်ပေါ့။ တောက်လျှောက် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတယ်လေ။ မနေ့ညနေ ၅ နာရီ မိနစ် ၄၀ ကျော်ကျော်လောက်က ချောင်းဆုံအောက်မှာ ချောင်းဆုံနဲ့ ဘုရားတော်ကြားမှာ ဖြစ်တာ။”
အလားတူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ) တပ်များကလည်း ပျောက်ကြားနည်းစနစ်များ သုံးပြီး စစ် အစိုးရတပ်များကို တိုက်ခိုက်နေသည်ဟု ဗိုလ်မှူးအေဝမ်းက ဆက်ပြောသည်။
“ကေအဲန်ယူနဲ့ဖြစ်နေတာက ဟိုး ဟောကလား ကနေစဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ လေးဖိုး၊ အော်ပလိုတို့ တာ တေတို့ တောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာပဲ။ သူတို့ကလည်း ဒီကျနော်တို့ ကေအဲန်ယူကလည်း ပျောက်ကြား ပဲသုံးတယ်လေ။ အဲ့ဒါ ထိခိုက်တာတို့က တော်ရုံတန်ရုံတော့ မရဘူး။ နအဖ ဖက်ကတော့ ဒဏ်ရာရတာ ထိခိုက်တာကတော့ တောက်လျှောက် ရနေတာပဲ။ လာတဲ့အဖွဲ့နဲ့ စောင့်တဲ့အဖွဲ့ စောင့်တဲ့အဖွဲ့က ပစ် မယ်။ လာတဲ့အဖွဲ့ကတော့ ထိမှာပဲလေ နော်။ ကေအဲန်ယူ တပ်ရင်း ၁၆ နဲ့ ဖြစ်တာ။”
ယခုအခါ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းသွားသော ဒီကေဘီအေ တပ်ရင်း ၉၀၇၊ ၉၉၉ တပ်များမှ တပ်သား များသည်လည်း ဒီကေဘီအေနှင့် လာရောက်ပူးပေါင်းလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
စစ်အစိုးရတပ်များသည် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း တွင်သာမက ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ပြည်သူ့စစ် အသွင် ပြောင်း ရန်ငြင်းဆိုထားသော အပစ်ရပ် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ ၁ ထိန်းချုပ်နယ်မြေ ထဲကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲ လုံခြုံရေး အကြောင်းပြကာ တပ်အင်အားများ တိုးချဲ့ နေရာယူထားသည်။
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းများနှင့်ပါ ပြီးခဲ့သည့် အပတ်တွင် တိုက်ပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ သည်။
ဗမာစစ်အစိုးရတပ်နှင့်တိုင်းရင်းသားတပ်တွေအကြားနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်နေအုံးမည်လို.ကြံ.ဖွတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်းကထိုင်း အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်အဘိဆစ်အားဖနွန်းဖင်မှာတွေ.ဆုံစဉ်ပြောကြားခဲ့တယ်လို.ထိုင်းသတင်းဌာနတစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါသည်၊ကြံ.ဖွတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးသိန်းစိန်းက စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုချစ်သယောင်ဆောင်ပြီးကူညီပေးပါ၊ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးပါလို.ထိုင်းအစိုးရအဘိဆစ်အားတောင်းဆိုသွားတယ်သတဲ့၊
ဤပြောကြားချက်ကို အေရာဝတီ၊ချောဖရယား၊မဲခေါင်စီပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအစည်းအဝေးကျင်းပနေသည့်ကမမ္ဘောဒီယာနိုင်ငံ၊ဖနွန်ဖင်မှာဖြစ်သ ည်၊မြဝတီနှင့်ဘုရားသုံးဆူနယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲဟာဒီကေဘီအေနှင့်ဗမာစစ်အစိုးရတပ်အကြားဖြစ်သည်ကိုလည်းအဘီဆစ်ကဦး သိန်းစိန်းကိုပြောပြသေးတယ်၊ကေအန်ယူကြားတပ်နှင့်ဗမာစစ်အစိုးရတပ်အကြားမဟုတ်သည့်အကြောင်းတွေပေါ့၊စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကိုကောင်းကောင်း မွန်မွန်စောင့်ရှောက်ပေးထားပါတယ်လို.အဘိဆစ်ကပြောပြသည့်အခါမောင်သိန်းစိန်းမျက်နှာမလှဘူးလို.သတင်းထွက်နေပါတယ်သတဲ့၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာဟာဥပဒေအရဆက်ချုပ်နှောင်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးသောကြောင့်လို.ဦးသိန်းစိန်းကရှင်းပြသည့်အခါဗမာပြည် မှာဥပဒေရှိသယောင်ယောင်ပြောသွားသေးတာကိုအဘီဆစ်က ခီ...ခီး...ဟီ.. လို.ရီးပြီးကောင်းပါတယ်လို.ပြန်ပြောသတဲ့၊ဒါပေမဲ့၊မောင်သိန်းစိန်းစကားကို မယုံသည့်သူများနေတော့၊နိုင်ငံတကာရဲ.ဖိအားပေးမှုကြောင့်ခင်ဗျားတို.လွှတ်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို.မေးတော့၊မောင်းသိန်းစိန်းက`“နိုင်ငံတ ကာကိုငါတို.ကြောက်စရာလာကွ..လို.ပြန်အော်လိုက်သတဲ့။
Sporadic fighting likely to continue in Myanmar: Thai PM
PHNOM PENH, Nov 17 - Thai Prime Minister Abhisit Vejjajiva said on Wednesday Myanmar Prime Minister Thein Sein has informed him that sporadic fighting between government troops and ethnic armed forces is likely to continue in border areas, while urging Thailand to help take care of the Myanmar people who flee into Thailand to escape the clashes into the neighbouring territory.
The Thai premier made the remarks as he met his Myanmar counterpart on the sidelines of the 4th Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) Summit in the Cambodian capital of Phnom Penh.
Mr Abhisit said he has discussed with Mr Thein Sein over the clashes between the Democratic Karen Buddhist Army (DKBA) splinter faction and the Myanmar army along the Thai-Myanmar border which erupted immediately after the country's first election in 20 years on Nov7and had an impact on Thailand.
The Myanmar premier said that minor clashes between the government troops and the ethnic armed forces are likely to continue in some areas foracertain period and has sought cooperation from Thailand to help take care of the Myanmar people who escaped the fights, according to Mr Abhisit.
Some 20,000 Myanmar people fled fighting in Myawaddy into Mae Sot district in Thailand's Tak province, while several thousands crossed the border to Kanchanaburi's Sangkhla Buri district as the DKBA faction clashed with Myanmar troops in the Myanmar border town of Phaya Tong Su.
The Thai authorities have provided them temporary shelters and initial humanitarian aid, while pledging that they will not force the mainly ethnic Karen back to their homes if the situation there remained unsafe.
Most of the Myanmar people however returned to their countries as the clashes ended, with some of them returning into Thai territory when renewed gunfire is heard.
Regarding the release of pro-democracy leader Aung San Suu Kyi, the Thai premier said he has been informed that the release was done according to the law as the detention period expired.
When asked whether Suu Kyi's release will ease pressure from the international community on Myanmar, Mr Abhisit said it depends on the stance of western countries, which is now still unclear.
Mr Abhisit however said initially Myanmar has responded to the reaction of the world community as it had earlier promised. (MCOT online news)
တိုင်းရင်းသားအသံ၏တိုက်ပွဲသတင်းအထူးစာမျက်နှာ Wordpress မှာလည်းဖတ်ရှူနိုင်ပြီ
ဒီကေဘီအေနှင့်ဗမာစစ်အစိုးရတပ်အကြားဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်ထားသည့်သတင်းစာနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတွေကကေအန်ယူကြား ဖြတ်တပ်ဟုဟောပြောထုတ်လွှင့်တာဟာလယ်ကွင်းအလယ်မှာဆင်ဖြတ်သွားတာကိုဆိတ်ဖြတ်သွားသည်ဟုပြောင်းကျကျလိမ်လည်ခြင်းဖြစ်သည်၊ဒီလူ ဘာကြောင့်ပြောင်းကျကျလိမ်လည်နေသလဲဆိုတာဆန်းစစ်ကြည့်ရမည်၊
စတုတ္ထအချက်၊ကေအန်ယူအဖွဲ.ကနဂိုကတည်းအပစ်ခတ်ရပ်စဲထားသည့်အဖွဲ.မဟုတ်သဖြင့်ဖြစ်နေကျပုံမှန်တိုက်ပွဲတစ်ခုဟုပြည်သူလူထုအကြားထင်ယောင်မြင်ယောင်ဖြစ်အောက်ဖန်းတီးထားချင်သည်၊ဘာပဲပြောပြော၊ ကျန်းရှိသည့်အပစ်ရပ်ထားသည့်အဖွဲ.အစည်းကရော၊ရွေးကောက်ပွဲဝင်သည့်နိုင်ငံရေးအဖွဲ.အစည်းတွေကပါတစ်နေ.ကျရင်စစ်အစိုးရ၏အတွင်းရန်သူ၊သို. မဟုတ်အနီးကပ်ရန်သူဖြစ်နေကြောင်းကိုသက်သေပြလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ဗမာစစ်အစိုးရမီဒီယာ၏ပြောင်းကျကျလိမ်ညာဖော်ပြသည့်အကျင့်ကိုကမ္ဘာကသိ ခွင့်ရသွားတာဟာအတိုကအခံအင်းအားစုများအတွက်တန်ဘိုးမဖြတ်နိုင်သည့်အကျိုးအမြတ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လျှော်ညီခြင်းမရှိသော ကြိုတင်မဲကောက်ခံ မှုများ မြန်မာပြည်အနှံ့ ဖြစ်ပေါ်နေ၊ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ ပေးရာတွင် သတ် မှတ်ထားသော နည်းဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ စနစ်မကျ ခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ပါက ပယ်မဲဖြစ်နိုင်
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် လျှော်ညီခြင်းမရှိသော ကြိုတင်မဲကောက်ခံမှုများ မြန်မာပြည်အနှံ့ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း ဒေသသတင်းများအရ သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများအရ နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့တွင် လာရောက်မဲပေးနိုင်ခြင်းမရှိသူများအား ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ပြုထားသော်လည်း အဆိုပါကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခွင့်အား အသုံးချပြီး အတင်းအကြပ်ဆန္ဒမဲကောက်ခံမှုများ ရှိနေသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
''ကြိုတင်မဲ အရေအတွက်က ထက်ဝက်လောက်ဖြစ်နေတော့ လွိုင်ကော်၊ ဒီမော်ဆိုတို့မှာ မနိုင်လောက်ဘူး။ ဖယ်ခုံ ဘက်ကိုပဲ မျော်မှန်းရတော့မှာပေါ့။ ထက်ဝက်လောက်က ကြိုတင်မဲတွေဖြစ်နေတော့ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို တင်ပြထားပါတယ်။ ရွာတွေမှာဆို ထက်ဝက်ကျော်နေတယ်။ ငွေကုန် လူပန်းဖြစ်ရတာပေါ့။ ဒေသခံလူမျိုးတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုတင်မဲကြောင့် မြို့ပေါ်မှာအနိုင်ရဖို့ မလွယ်ဘူး။ ဖယ်ခုံနဲ့နယ်ဘက်တွေ ကိုပဲ မျော်မှန်းနေရတယ်ပေါ့''ဟု ကယန်းအမျိုးသားပါတီဒုဥက္ကဋ္ဌဦး ပေါလူချန်းက နိုဝင်ဘာလ(၆) ရက် နေ့တွင်လွိုင်ကော်မြို့၌ ပြောကြားခဲ့ သည်။
''အခုတောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်မှာ ကြိုတင်မဲကောက်တာ နှစ် ရက်အတွင်းမှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်သွားပြီ။ ဒါကြောင့် သက် ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်ကို ဒီကိစ္စနဲ့ပတ် သက်လို့ပြောကြားဖို့ ဆောင်ရွက် နေပါတယ်''ဟု တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာ စောနိုင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
''ကျွန်တော်က နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့က ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် အချို့တွေနဲ့ မရမ်းကျေးရွာနဲ့ ဆိပ်ကြီးကျေးရွာကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်တော့ ပါတီတွေရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ကျေးရွာရပ်ကွက် ရွာသူရွာသားတွေက ဘယ်သူတွေကို မဲထည့်မလဲဆိုတာရယ် ကြိုတင်မဲကိစ္စတွေကို သွားရောက်လေ့လာခဲ့တာပါ။ လေ့လာချက်အရ ဒေသခံတွေအများစုက စာမတတ်ကြဘူး။ နိုင်ငံရေးလေ့လာမှု လုံးဝမရှိကြဘူး။ မဲဆွယ်အား ကောင်းတဲ့ ပါတီတွေအားလုံးနီးပါးက ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့သိရှိရတယ်။ အဲဒီပါတီက လူကြီးတစ်ယောက်ဟာဆိုရင် သူမဲအနိုင်ရရှိရေးအတွက် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်အတွင်းမှာ မဲနှိုက်တဲ့စနစ်နဲ့ လုံးချင်းအိမ်ပုံစံတွေကို ဆောက်ပေးနေတာတွေ့ရတယ်။ အိမ်အများစုဆိုရင် ပြီးစီးနေပြီး အခြေချနေထိုင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တချို့လူကြီးတွေကလည်း ကိုယ့်ပါတီအနိုင်ရရှိရေးအတွက် ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့ မဲဆွယ်နေတာတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုငွေအင်အား၊ လူအင်အားတွေနဲ့ မဲဆွယ်တဲ့အပြင် အခြားပြိုင်ဘက် ပါတီတွေကို ပုတ်ခတ်ပြီးပြောဆို မဲဆွယ်တဲ့အတွက် အခြားပါတီတွေက တိုင်ကြားနေတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မဲဆွယ်တဲ့အခါမှာ အဓိကအားဖြင့် ရွာသူရွာသားအားလုံးနီးပါးက အခုလာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ ဘယ်သူတွေက ဘယ်ပါတီကလဲဆိုတာ ဘယ်သူကဘာလဲဆိုတာကို မသိကြဘူး။ သိဖို့လည်း မလေ့လာကြဘူး။ အဓိကအားဖြင့် သူတို့တွေအကုန် လုံးနီးပါးက တစ်နေ့တာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့ လူတွေဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိရတယ်။ ဒီလိုနေရာတွေမှာ ငွေအင်အား၊လူအင်အားတွေနဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်တဲ့ပါတီတွေကတော့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ ဖြိုးရေးပါတီတစ်ခုတည်းပဲလို့ လေ့ လာတွေ့ရှိရပါတယ်''ဟုအဆိုပါဒေသ သို့သွားရောက်သတင်းရယူခဲ့သော Eleven Media Group ၏သတင်းထောက် ကိုဝင်းမြင့်ကျော်ကပြောပါသည်။
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်တွင် မဲရုံပေါင်း ၄၀ ၀န်းကျင်ရှိပြီး တစ်မြို့နယ်လုံးရှိ မဲဆန္ဒပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ တစ်သိန်းသုံးသောင်းဝန်းကျင်ရှိသည့်အနက် ၃.၅ ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်မှာ ကြိုတင်မဲပေးသူများဖြစ်ကြောင်း ကျိုင်းတုံမြို့နယ်ရှိ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ကြိုတင်မဲကောက်ခံမှုမှာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထက် မပိုကြောင်း၊ သို့သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အချို့၏ ကောက်ခံမှုပုံစံမကျသောကြောင့် မြို့နယ်ကော်မရှင် ထံသို့ တိုင်ကြားမှုအချို့ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
''လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်းက သပြုကုန်းကျေးရွာမှာဆိုရင် မဲပေးနိုင်တဲ့သူအရေအတွက်က ၅၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိပါတယ်။ ကြိုတင် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ထုတ်ယူတာ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းတောင် မရှိပါဘူး။ လက်မှတ် ၄၅၀ ထုတ်တာ ၂၀၀ နဲ့ ၃၀၀ အကြားမှာပဲ မဲပေးကြပါတယ်။ ကြိုတင်မဲကောက်ခံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြို့နယ်ကော်မရှင်ကလည်း နည်းဥပဒေအတိုင်းပဲ ကောက်ခံကြဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ ဥပဒေပြင်ပကနေ ကောက်ခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောက်ခံ သူရဲ့တာဝန်ပဲဖြစ်မယ်လို့ သတိပေး ထားတယ်လို့သိရပါတယ်''ဟု လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်း ရောက်ရှိနေသော သတင်းထောက်တစ်ဦးက နိုဝင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
လပွတ္တာမြို့နယ်အတွင်းရှိ သပြုကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သင်္ဃန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇင်ရွဲကျေးရွာအုပ်စုများတွင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသူ အများစုမှာ ၄င်းတို့ မဲပေးရမည့် ပါတီနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို သေချာစွာသိရှိကြခြင်း မရှိကြောင်း သိရသည်။
''ဒီမှာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မ ရှင်က အရင်ကတည်းက ကြိုတင် မဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိပ်ပြီး တင်း ကျပ်မထားဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ် ပူမိတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ်စား လှယ်လွှတ်ပြီး သွားကြည့်ခိုင်းတဲ့ အခါမှာ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲ လက်မှတ် စာအိတ်တွေကို ချိတ်နဲ့ မပိတ် တာတွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် စိုး ရိမ်မိတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ အဖြေ က ပြောင်းသွားနိုင်တာကိုး''ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက် တစ်ပါတီမှ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် ပြည် သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုင်းဝင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
''မိသားစုတစ်စုမှာ ငါး ယောက်ရှိရင် နှစ်ယောက်သုံး ယောက်က ကြိုတင်မဲပေးရမယ်ဆို ပြီး ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျေးရွာ ရပ်ကွက်ကော်မရှင်တွေ မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးစည်းရုံးရေးမှူးတွေ ကဖိအားပေးမှုတွေရှိတယ်'' ဟုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု ပါတီမှ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ပြည် သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးမာခါးက နိုဝင်ဘာလ၆ရက်နေ့ တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ပြော ကြားခဲ့သည်။
''မက္ကာသွားမယ့်သူတွေကို လည်း ကြိုတင်မဲထည့်ပေးပြီးမှ သွားခွင့်ပြုပါတယ်။ အဲဒီလိုကြို တင်မဲထည့်တဲ့နေရာမှာလည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုထည့်ခိုင်းပါတယ်'' ဟု မြစ်ကြီးနားမြို့မှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တစ်ဦးကပြောကြားခဲ့ သည်။
အဆိုပါသတင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာဆရာကြီး လူထုစိန်ဝင်းက ''ကြိုတင်မဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တော်တော်လေးကို ဥပဒေလက်လွတ်လုပ်နေတာတွေ ဆရာအနေနဲ့ ကြားနေရတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် တော်တော်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာကို ကြားရတာ တွေရှိတယ်။ ဒါမျိုးတွေမှာ မီဒီယာတွေရဲ့ တာဝန်ကသက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သိအောင် သက်သေအထောက်အထား အခိုင်အမာနဲ့ တင်ပြပေးရမယ့် တာဝန်ရှိတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါကို ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့ ဆန္ဒလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်သူဘယ်ဝါအပေါ်မှာ အကြည်အညိုပျက်ပါစေ ဆိုတဲ့သဘောလည်း မရှိဘူး။ မဖြစ်သင့်မဖြစ် ထိုက်တာတွေ၊ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာတွေ အောက်ခြေအနှံ့အပြားမှာ ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒီလိုဖြစ်နေကြတဲ့ အကြောင်းအရင်း တွေကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ သိအောင်ပြောမယ့်၊ ဆိုမယ့်၊ တင်ပြမယ့်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မရှိတဲ့အတွက် ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီတာဝန်တွေကို မီဒီယာတွေက ယူရမယ်။ ဒါကို တိုင်းပြည်က တာဝန်ရှိသူတွေ သိအောင် အတိအကျ အခိုင်အမာဖော်ထုတ်ရေးသားမှ မီဒီယာရဲ့ တာဝန်ကျေလိမ့်မယ်လို့ ဆရာ့အနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာ ဆိုထားတာက မလွဲမရှောင်သာလို့ ခရီးသွားရမယ့်သူတွေ၊ တာဝန်ကျနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ၊ ကျန်း မာရေးအခြေအနေအရ မသွားနိုင် မလာနိုင်တဲ့သူတွေမှအပ အခြားသူတွေကို ကြိုတင်မဲ မကောက်ခံဘူးလို့ ဆိုထားတယ်။ မလွဲမရှောင်သာလို့ ခရီးသွားရမယ့်သူတွေ၊ တာဝန်ကျနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ မသွားနိုင်မလာနိုင်တဲ့ သူတွေဟာ သက်ဆိုင်ရာမဲပေးခွင့်ရှိသူရဲ့ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းတောင် မရှိနိုင်ပါဘူး။ အလွန်ဆုံး (၂)ရာခိုင်နှုန်း (၃)ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတယ်။ (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာတောင်မှ သဘာဝမကျတဲ့ ဖော်ပြမှုလို့ဆရာ့ အနေနဲ့ယူဆတယ်။ဒီလိုသဘာဝမကျတဲ့ဟာတွေကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စိစစ်သင့်တယ်။ စစ်ဆေးတွေရှိရင် ဒါတွေကိုအရေးယူသင့်ပါတယ်''ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
''ကျွန်တော်တို့ Eleven Media Group က သတင်းထောက် ၄၀ နီးပါးလောက် နယ်မြို့တွေကို ရောက်နေပါ ပြီ။ အခုလောလောဆယ်မှာ ကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့သိရသလောက်တွေကို သတင်းပြန်ပို့နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ တစ်နေရာနဲ့ တစ်နေရာမတူ တာတွေအများကြီး တွေ့နေရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကြိုတင်မဲဆိုတာ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေ၊ ခရီးသွားမယ့်သူတွေစတဲ့ သတ်မှတ်ဥပဒေပါ အတိုင်းပဲ ကောက်ခံရမှာဖြစ်သလို ကြိုတင်မဲဟာ သက်ဆိုင်ရာမဲရုံအလိုက်၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် မဲဆန္ဒနယ်အလိုက်ဆိုရင် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ကျော် နေမယ်ဆိုတာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒါတွေကို သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က လိုအပ်သလို စီစစ်ပြီးပယ်ဖျက်တာ၊ အရေးယူတာတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒေသအချို့မှတော့ သက်ဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဥပဒေပါအတိုင်းပဲလုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားတာတွေ ကြားနေရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုရင်လည်း ကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေအတိုင်း အတိအကျလုပ်ဆောင်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါတွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကြိုတင်မဲနဲ့ ပတ်သက်ရင် အောက်ခြေအချို့နေရာတွေမှာ တစ်ကျောင်း၊ တစ်ဂါထာ၊ တစ်ရွာတစ်ပုဒ်ဆန်းဆိုသလို လုပ်နေတာတွေလို့ ထင်ပါတယ်။ တချို့နေ ရာတွေမှာ Voter Education အား နည်းမှုအပေါ် အခွင့်ကောင်းယူ လုပ်ဆောင်တာတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာအစိုးရ၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒေသအချို့က မသမာတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အချို့က မိမိတို့အနိုင်ရရေးတစ်ခုအတွက် သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်ကျေးရွာက တာဝန်ရှိသူတွေကို ရင်းနှီးမှုနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေကြတာလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မှန်မမှန် စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှဖြစ်မှာပါ။ မီဒီယာတွေမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာက မီဒီယာတွေ လာရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေ တာဝန်ပိုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း တစ်ချို့သတင်းအချက်အလက်တွေကို အထောက်အထားအပြည့်အစုံနဲ့ စုဆောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားမှာပါ။ ဒီနေ့(၆-၁၁-၂၀၁၀)အထိတော့ ဒေသအသီးသီးက ကြိုတင်မဲနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို စောင့်ကြည့်နေပါ တယ်'' ဟု Weekly Eleven News Journal မှ တာဝန်ခံအယ်ဒီတာ ကိုဝေဖြိုးက ပြောပါသည်။
ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးရာတွင် သတ်မှတ်ထားသော နည်းဥပဒေများနှင့် ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း၊ စနစ်မကျခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်ပါက ပယ်မဲဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေများနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေများတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။
''ကော်မရှင်က အတည်ပြုထားတဲ့ အမှတ်အသားမပါတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲရဲ့တံဆိပ်မပါတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ တာဝန်ခံထုတ်ပေးသူရဲ့ လက်မှတ်မပါတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးထက် ပိုပြီးဆန္ဒပြုထားတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ ဆန္ဒပြုထားခြင်းမရှိတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ ဆန္ဒပြုထားတာက မသေချာမထင်ရှားတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်မျိုး ပြီးတော့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အတုလို့ ကော်မရှင် ဒါမှမဟုတ် ကော် မရှင်အဖွဲ့ခွဲနဲ့ မဲရုံးမှူးက ဆုံးဖြတ်တဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ဆန္ဒမဲပေးသူကို သိရှိနိုင်ဖို့ အမှတ်အသားပြုထားတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ ဆုတ်ဖြဲထားတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ် အဲဒီလိုကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေဟာ ပယ်မဲတွေပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲကို မသာမာတဲ့နည်း တစ်ခုခုနဲ့ပြုလုပ်ထားတာ ထင်ရှားရင်လည်း ပယ်မဲဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးမယ့် သူတွေက မိမိတို့ပေးမယ့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲတွေကို ပယ်မဲမဖြစ်ဖို့ သတိပြုသင့်တယ်''ဟု ကြိုတင်ဆန္ဒမဲနှင့်ပတ် သက်၍ အထက်တန်းရှေ့နေတစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော(၅၄ နှင့်အနှစ် ၅၀)ရှိသွားပြီးဖြစ်သော၁၉၅၆ နှင့်၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကဆိုဖဆပလအစိုးရကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေဒေသတွေမှာခြိမ်း ခြောက်ဖမ်းဆီးမဲခိုးမဲဝှက်မှုဖြင့်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့သည်၊ဦးနုနှင့်ဦးဘဆွေ၊ဦးကျော်ငြိမ်းတို.အကြားမှာအာဏာလုပွဲဖြစ်ခဲ့သည်၊မဲပုံအဖြူရောင်နှင့်အမဲ ရောင်ထောင်ထားပြီးတော့မဲပုံအမဲရောင်ထဲသို.မဲထည့်ခဲ့လည်းမိုးလင်းရောက်တော့မဲပုံအဖြူရောင်အထဲသို.ရောက်သွားခဲ့တာပဲ၊တိုင်းရင်းသားဒေသတွေ မှာမဲပုံအဖြူထဲပဲထည့်ထည့်၊အမဲပုံထဲပဲထည့်ထည့်ညအချိန်ရောက်ရင်မဲပုံဖောက်ပြီးမဲခိုးခြင်း၊မဲပုံလဲခြင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့တာပဲ၊
လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၏စိုးရိမ်ကြောက်ကြံ့မှုကဒီလိုပါ၊ “''ဒါပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်တဲ့ အသည်းကြားက မဲတစ်ပြားပါ။ မလေလွင့်ဖို့ အဆုံးရှုံး မခံဖို့ကို ပေးတဲ့ မဲက ကိုယ်ပေးတဲ့သူအတွက် မဟုတ်ဘဲ၊ တစ်ခြားတစ်ဘက်ကို ပြောင်းမသွားဖို့ မဲရုံတွေကိုသွားပြီး မဲရေတွက်တာ ပြည်သူတွေ စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မဲပေးရုံနဲ့ တာဝန်ပြီးဆုံးပြီလို့ မယူဆစေချင်ပါဘူး။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မဲတွေ မဆုံးရှုံးဖို့ပါ။ မဲရုံတွေကို ပြည်သူတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလို့ရပါတယ်။ ရေတွက်တာကို စောင့်ကြည့်ဖို့ (၁၀)ဦး လက်မှတ်ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတာဝန်ကို ပြည်သူတွေ ထမ်းဆောင်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာ ရပ်ခံချင်ပါတယ်''ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက ပြောပြခဲ့သည်။”